‘फ्रान्समा नेपाली सुरक्षित छन्’- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २३, २०७६ दीपक अधिकारी
फ्रान्स — फ्रान्सको दूतावासले एन्डोरा, मोनाको, पोर्चुगल, फ्रान्स र युनेस्को हेर्छ । मोनाकोमा कन्सुलर हुनुहुन्छ । अहिलेसम्मको रेकर्डअनुसार मोनाको र एन्डोरामा नेपाली एक जनापनि छैनन् । त्यसैले त्यहाँ नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कुरै भएन ।
पोर्चुगलबाट प्राप्त जानकारीअनुसार फारोमा एक जना नेपाली संक्रमित हुनुभएको थियो । उहाँ निको भइसक्नु भयो । अरु ५-६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको थियो । अरु तिन जना संक्रमित व्यक्तिसित नजिक भएकोले तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । अन्य ६ जनालाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुस् भनेको हो, कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्छ भन्ने झिनो शंका भएकोले ।
पोर्चुगलकै लिस्बोनबाट करिब १७० किमी परको ओदिमिरा भन्ने ठाउँमा मार्च २५ मा १७ जना नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । ती नेपालीसित १ जना विदेशीको सम्पर्क रहेछ । ती विदेशीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले नजिक भएका सबै नेपालीलाई पनि संक्रमण हुनसक्ने आशंकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । लिस्बोनमा पनि अन्य दुई जना नेपालीलाई संक्रमण भएको भन्ने आएको छ । उहाँहरूको आसपासमा हुने अन्य ६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । फ्रान्समा कुनै पनि नेपालीलाई कोरोना संक्रमित भएको भन्ने रेकर्ड अहिलेसम्म छैन ।
युनेस्कोमा हामी एसिया प्यासिफिक ग्रुपका ४३, ४४ देश छौं । हरेक महिना प्रत्यक्ष मिटिङ हुन्थ्यो । यो पटक भिडियो मिटिङ गर्यौं । मैले हाम्रो सरकारको तर्फबाट मृतकका परिवारमा समवेदना र बिरामीहरूमा स्वास्थ्य लाभको कामना सुनाएँ ।
फ्रान्स र पोर्चुगलमा धेरै नेपाली भएकोले यी दुई मुलुकका बीच एकअर्का मुलुकका नागरिकलाई जस्तोसुकै सहयोग दिनुपरे पनि दिने प्रस्ताव गरेर फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठायौं । नेपालमा भएका फ्रान्सेली र पोर्चुगलका नागरिकलाई पनि बिना पूर्वाग्रह सहयोग गर्छौं भनेर आस्वस्त पार्यौं । फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहयोग गर्ने आस्वाशन प्राप्त भयो । पोर्चुगल सरकारको तर्फबाटपनि जसको भिसा थप्नुपर्ने हो, वैधानिकता सकिन लागेको हो तिनको जुलाई १ सम्म वैधानिक मानिने भनेको छ । यो संकटको बेला सामाजिक सहयोग, अरु सहयोग पनि पाउने भनिएको छ । फ्रान्समा मार्च १६ सम्म मान्यताप्राप्त कागज हुनेको ३ महिनासम्म स्वतः वैध हुने भनिएको छ । भोलि संकट लम्बियो भने फेरि थपिन सक्ला ।
कोरोना भाइरस सरेपछि पनि लक्षण देखिन १४, १५ दिन लाग्छ भन्छन् । यो भाइरसको सबैभन्दा जटिल पक्ष कसलाई लागेको छ भन्ने थाहा नहुनु हो । कोहि हट्टाकट्टा देखिन्छ । निरोगी छ जस्तो लाग्छ । तर उसैलाई लाग्या हुनसक्दो रहेछ । कसैलाई लागे पनि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी छ भने उसले सजिलै पचाउने रहेछ । तर ऊसित संपर्कमा भएको मानिसलाई लाग्दो रहेछ । रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी छ भने भाइरस लाग्नेसित बस्नेलाई पनि नहुने रहेछ । मान्छे स्वस्थ देखियो भनेर नजिक जान नहुने रहेछ । कागज, कार्टुन, फलाम जे बाट पनि सर्ने रहेछ । फेरि जीवित पनि होइन रहेछ यो भाइरस । केबाट सर्छ केबाट भन्नै नसकिने रहेछ ।
क्वारेन्टाइनमा हामी दुई हप्ता बसिसक्यौं । हिजो शुक्रबारबाट बल्ल वृद्धाश्रममा मृत्यु हुनेको संख्यापनि जोड्न थालिएको छ, फ्रान्समा । पहिले दिनको ४ सय, ५ सयको हाराहारीमा मृत्यु भएको विवरण आउँथ्यो । वृद्धाश्रममा भएको मृत्युको संख्या पनि जोड्न थालेपछि प्रत्येक दिन १ हजार १ सय, १ हजार २ सय जनाको मृत्यु भएको विवरण आइरहेको छ ।
यो बीचमा जसलाई देखिएन अब नदेखिएला । सुरुमै विजारोपण हुनेको टुसा पलाएको जस्तो हो । सुरुमा धेरै मानिस रेस्टुरेन्ट तिर गए । पार्कमा निस्किए । खानपिन, नाचगान, घुमघाम गरे । त्यहि बेला यो भाइरस धेरै फैलियो । मेरो विचारमा अहिले जनचेतना पनि बढ्यो । सतर्क भए मानिस । अब खास नबढ्ला ।
यो भाइरसले निकट भविष्यमा ठूलो संकट पार्ला जस्तोपनि देखिन्छ । किनभने आगामी ३ महिनालाई कृषीमा काम गर्ने दुई लाख कामदार चाहियो भन्दै यहाँका कृषी मन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छ । फ्रान्समा उत्तर अफ्रिका र पूर्वी युरोपबाट कृषीमा काम गर्न आउने रहेछन् । फ्रान्स बस्ने तर वैधानिक कागजपत्र नहुनेले पनि कृषिमा काम गर्थे । ति कागजात नहुनेहरू सुरक्षाकर्मीले समात्ला, थुन्ला भन्ने डरले पनि निस्किन डराउँछन् । त्यसले गर्दा कामदारको संकट भयो । त्यहि भएर कृषी मन्त्रीले अहिले बेरोजगार बनेकाहरूलाई आउनुस कृषी सेनाको रूपमा काम गरौं भनेर आह्वान गर्नुभएको छ । फ्रान्समा अहिले बाली भित्र्याउने बेला छ । अर्को बाली लगाउन पनि कामदार चाहिएको छ ।
जिन्दगी कस्तो रहेछ भने जुन खालको प्लेन चढेपनि, जति महँगा गाडी हुइँकाएपनि, जत्रा ठूला पानीजहाजका मालिक भएपनि, खरबौं सम्पत्ती भएपनि सुन खान नमिल्दो रहेछ । जतिसुकै ठूलो धनाढ्य होस अलिकति भएपनि जाउलो नै चाहिने रहेछ । धनको के मतलब रैछ र ? हामी नहुनेले यसरि नै चित्त बुझाउने हो ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के रहेछ भने आपतविपतको बेला जीवन चलाउन सानो झुपडी, सानै इनार वा कुवा, एक दुई वटा गाई भैंसी, अलिकति बारी, थोरै धान हुने जमिन, सागपात लगाउने एक चोक्टो करेसो । यो हाम्रो समाजको बनावट रैछ संकटमा सजिलोसित बाँच्न सकिने । अत्मनिर्भर हुने खालको ।
मध्यपूर्वमा तेलका खानी छन् । तर खेती त हुन्न । एक दिन तेलको कुवा सुकेको बेला एक मुठी अन्न माग्न हाम्रैमा आउनुपर्ने हुन्छ । किनकी त्यहाँ अन्न त उब्जिन्न । अति धेरै मिहिनेतले, ठूलो धन खन्याएर, माटो बोकेर ल्याएर अलि अलि उब्जे मात्रै हो । हाम्रोमा त जतापनि त्यत्तिकै फल्छ । त्यसैले यो कोरोना भाइरसको संकटले धनसम्पत्ती केहि होइन भन्ने त सबैलाई पाठ सिकाएको छ ।
मेरो विचारमा आगामी केहि महिना असहज नै हुन्छ । स्थिति गाह्रो हुँदै गयो भने खान पनि पाइन्न कि ? अहिले पाकेको खाद्दान्न, फलफूल टिप्न जाने मान्छे छैन । बाहिरबाट कोहि आउँदैन । मुलुक भित्र थन्काएर राखेको कति पो होला र ? लाखौं मानिसले बस्ने, खाने तर उब्जनी नहुने र थप्ने नगरेपछि कति दिन धान्ला ? भोलि कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएर यसै गरी ३-४ महिना घरमै थुन्नु पर्ने भएमा के खाने ? ग्रोसरि स्टोर रित्त्तिए भने कोरोनाले होइन खान नपाएर पो मर्छन् त मानिस ।
खेतीपनि आज रोपेर भोली त हुन्न । अहिले रोप्न नसके ४ महिनापछि के खाने ? पछिको लागि खान अहिले मजदूर पाइन्न भनिरहेका छन् । ३-४ महिना पछि जहाज, रेल, ठूला घर, महँगा कार भएर त बाँचिन्न । मानिसले गरेका आविस्कार मध्ये घरमा खान उमाल्ने र पानी तताउने बाहेक अरु ठूला ठूला, महँगा आविस्कारको काम भएको छैन अहिले ।
यो रोगको प्रभाव शून्यमा झार्न सकिएन र त्यो अवस्थामा नपुर्याउँदै खुला गरेर केहि समयपछि यो भाइरस फेरि निस्कियो भने त खत्तमै भएन ? यो सुसुप्त अवस्थामा रहेर पछि फेरि देखियो भने के गर्ने ? त्यसैले यसको परिणाम के होला भनेर अहिले नै सोच्नपनि गाह्रो छ । तर विश्वमा धेरै विद्वान, अनुसन्धाता, योजनाकार भएकाले यस्ता समस्यालाई समाधानपनि गर्लान् भनेर आशावादी बनौं ।
(फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत अधिकारीसँग कान्तिपुरकर्मी ददि सापकोटासँगको कुराकानी आधारित)
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०७:३९
शनिबार कोरोना संक्रमण देखिएका तीन जनामध्ये स्थानीय एक महिला हुन् भने बाँकी दुई जना भारतबाट आएका हुन्
चैत्र २३, २०७६ अर्जुन शाह, भवानी भट्ट
कैलाली, कञ्‍चनपुर — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट थप ३ जना संक्रमित भएको शनिबार पुष्टि भएको छ । भारतबाट आएका दुई र स्थानीय एक महिलामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो । यसअघि धनगढीका एक जनामा कोरोना संक्रमण भएको थियो ।
संक्रमित महिला तिनै व्यक्तिका भाउजू हुन् । अरू दुई युवाचाहिँ भारतको महाराष्ट्र र उत्तराखण्डबाट गत चैत १० गते नेपाल आएका थिए । यससँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ पुगेको छ ।
थप व्यक्तिमा संक्रमण फैलिएको खबरले सुदूरपश्चिममा त्रास बढेको छ । सुदूरपश्चिमबाट भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू ठूलो संख्यामा फर्केकाले कोरोना संक्रमण भयावह बन्ने आशंकाले जनमानसमा त्रास बढेको हो ।
फागुन तेस्रो सातायता कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै १ लाख २४ हजार र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ७५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति नेपाल फर्केका थिए । नाकाको हेल्थ डेस्क र सुरक्षा निकाय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांश सुदूरपश्चिमका छन् ।
सुदूरपश्चिममै पहिलो संक्रमित देखिएका युवा दुबईबाट चैत ८ गते धनगढी आएका थिए । उनी तीन दिन ९ जना परिवारसँगै घरमै बसेका थिए । संक्रमित युवासँग भेट भएको १२ दिनपछि परिवारका सदस्यहरूको बिहीबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा थ्रोट स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार भाउजूको बाहेक परिवारका अन्य सदस्यहरूको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छैन । धनगढीमा ११० जनाको स्वाब पठाइएकोमा ६९ जनाको मात्रै रिपोर्ट आएको निर्देशनालयका हेमराज जोशीले बताए ।
दुबईमा काम गर्दै आएका ती युवा चैत ७ गते फ्लाइट इमरेट्सको ईके ०१५० नम्बरको उडानमा दुबईबाट दिल्ली आएका थिए । दिल्लीबाट उनी त्यही दिन एयर बिस्ताराको उडानबाट दिउँसो २ बजे काठमाडौं आएका थिए । दोस्रो दिन दिउँसो १२ बजे बुद्ध एयरको उडानमा नेपालगन्ज आएका हुन् । नेपालगन्जबाट उनी महेन्द्रनगर जाने हाइसमा अत्तरिया झरेर घर आएका थिए । ‘घरमा बस्दा परिवारसहित थुप्रै नातेदार र आफन्तसँग उनले भेटघाट गरेका थिए,’ एक नातेदारले भने ।
चैत १४ गते उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि अस्पताल पुर्‍याउने नातेदार भाइसहित परिवारका ९ जना सबैलाई दोस्रो दिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको क्वारेन्टाइनमा लिइएको थियो । परिवारका सबै सदस्य क्वारेन्टाइनमा गएपछि घरमा पशु चौपाया अलपत्र परेका थिए । पछि उनीहरूकै अनुरोधमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा उनीहरूलाई चौथो दिन घर फर्काइएको थियो । घरमा बस्दा पनि उनीहरूमा कुनै लक्षण भने नदेखिएको परिवारका सदस्यहरूले बताएका छन् । ‘कुनै पनि लक्षण नदेखिएर पनि कोरोना संक्रमण भएको सुनेर हामी अचम्म परेका छौं,’ परिवारका सदस्यले भने ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका घर भएका अर्का कोरोना संक्रमित २१ वर्षीय युवा भारतको मुम्बईबाट १२ गते धनगढीको गौरीफन्टा नाका हुँदै त्यसै दिन घर पुगेका थिए । घर पुगेर आधा घण्टाजति बस्न नपाउँदै छिमेकीहरूले उनलाई जोडबल गरेर प्रतापपुर क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याएका थिए । गौरीफन्टा नाकामा उनी दिनभर अन्य एक हजारसँगै रोकिएका थिए ।
महाकालीमा ट्युवबाट तरेका थिए संक्रमित
सुदूरपश्चिममा शनिबार कोरोना संक्रमित तेस्रा युवा अवैध नाकाबाट नेपाल छिरेको खुल्न आएको छ । उनका साथमा ११ जनाको टोलीले लोहाघाट हुँदै खल्लाबाट नेपाल प्रवेश गरेको थियो । भारतसँगको नाका बन्द भएपछि लकडाउनको अवधिमा उनी उत्तराखण्डको लुहाघाटबाट हिँडेर चैत १३ गते राति टनकपुर पुगेका थिए । दोस्रो दिन चैत १४ मा बिहानै भीमदत्त नगरपालिका–९ को खल्ला क्षेत्रबाट ट्युबबाट तरेर संक्रमित सँगै ११ जना नेपाल प्रवेश गरेका हुन् ।
उनीहरूलाई नदी तर्दै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर गड्डाचौकी पुर्‍याएको थियो । गड्डाचौकीस्थित हेल्थ डेस्कमा जाँचपछि सार्वजनिक गाडीमा राखेर वेदकोट नगरपालिका–१० सुन्दरपुरको कृषि पाइलट फर्ममा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो । ‘ट्युबबाट तरेर वारि पुग्दै थिए, हाम्रो टोलीले देखिहाल्यो,’ सशस्त्र प्रहरीको ३५ नं. गणका एसपी वीर सिंह साहुले भने, ‘त्यसपछि हामीले नियन्त्रणमा लिएर गड्डाचौकी पुर्‍यायौं, त्यहाँ जाँचपछि क्वारेन्टाइनमा पठाइएको हो ।’
एसपी साहुका अनुसार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने सुरक्षाकर्मीलाई पनि शनिबारदेखि नै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । संक्रमितसँग जोडिन पुगेका १५ जना जतिको थ्रोट स्वाब संकलनको तयारी भइरहेको छ । महाकाली अस्पतालसँग स्वाब संकलनका लागि आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘ब्रह्मदेव नाकाबाट सशस्त्र प्रहरीले ल्याएका ११ जना सबैलाई चैत १४ गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो,’ वेदकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिसा पालले भनिन्, ‘तिनै मध्येका एकजनामा संक्रमण देखिएको सुनिएको छ, तर आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन ।’ उनका अनुसार संक्रमतिसँगै आएका ११ जना सबै वेदकोट नगरपालिका भित्रकै हुन् । उनीहरू लुहाघाटबाट सँगै आएका हुन् ।
संक्रमित भएका ४२ वर्षीय व्यक्तिलाई शनिबार बिहानै धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ । संक्रमित र एक अर्का व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा एउटै कोठामा बस्थे । ११ जनामध्ये ९ जना एउटै वडाका एकै कोठामा बसेका थिए भने २ जना फरक वडाका एउटै कोठामा बसेका थिए ।
चैत २० गते नेपाली सेनाको छाउनी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले लुहाघाटबाट आएका ११ जनासँगै त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा आएका अन्य २ गरी १३ जनाको थ्रोट स्वाब संकलन गरेर लगेको थियो । कृषि पाइलट फार्मको क्वारेन्टाइनमा अहिले १७ जना राखिएका छन् । यहाँ रहेका सबै वेदकोट नगरपालिका क्षेत्रकै हुन् । यसैगरी भीमदत्त नगरपालिकाको महेन्द्रनगर बजारमै रहेका वैजनाथ माविमा राखिएका १० जनाको पनि सेनाको टोलीले स्वाब संकलन गरेको थियो ।
‘हामीले नदेखेर उनीहरू सिधै गाउँ पसेको भए, अवस्था फरक हुन्थ्यो,’ एसपी साहुले भने, ‘नाका बन्द सँगै लकडाउन भएपछि हामीले करिब तीन हजारलाई नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा पठाएका छौं ।’ उनका अनुसार यो अवधिमा आएका अधिकांशले अवैध नाका प्रयोग गरेका छन् ।
चैत २३ देखि लकडाउन हुँदासम्म कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ७५ हजार बढी नेपालीहरू भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका छन् । लकडाउन सुरु भएपछि मात्रै विभिन्न नाकाबाट ३ हजार नेपालीहरू दोधारा चांँदनी, गड्डाचौकी र ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । यसमा कतिपय ट्युबबाटै नेपाल प्रवेश गरेका पनि छन् । ‘लकडाउनको अवधिमा आएकाहरूबाट बढी जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ,’ एसपी साहुले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सर्तमा मात्रै छाडेका छौं, उनीहरू क्वारेन्टाइनमै भए संक्रमण बढ्दैन ।’
कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले संक्रमित व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै क्वारेन्टाइनमा भएकाले धेरै अन्य व्यक्तिमा संक्रमणको जोखिम कम रहेको बताए । आधिकारिक रूपमा रिपोर्ट आइनसकेकाले अहिले नै केही गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
धनगढीमै परीक्षण सुरु
उच्च जोखिम देखिएपछि कोरोना भाइरसविरुद्धको परीक्षण बिहीबारदेखि धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सुरु भएको छ । एकजना विशेषज्ञ सहित ४ जनाको टोलीबाट अस्पतालमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा परीक्षण सुरु भएको हो । तर हालसम्म परीक्षण भएका पोजेटिभ केसहरू राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकु र नेपाली सेनाको छाउनी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको हो ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०७:३२